AppSheet: निर्माण र Google Sheets को साथ सामग्री अनुमोदन मोबाइल अनुप्रयोग डिप्लोय गर्नुहोस् Martech Zone
जबकि म अझै समय समयमा विकास गर्छु, मसँग प्रतिभा वा पूर्ण-समय विकासकर्ता बन्ने समय दुवैको अभाव छ। मसँग भएको ज्ञानको म सराहना गर्दछु - यसले मलाई विकास संसाधनहरू र व्यवसायहरू बिचको खाडल कम गर्न मद्दत गर्दछ जुन प्रत्येक दिन समस्या पर्दछ। तर ... म सिक्नको लागि खोजीरहेको छैन।
मेरो प्रोग्रामिंग विशेषज्ञता लाई बढावा दिन केहि कारणहरु छन् जुन राम्रो रणनीति छैन:
मेरो क्यारियरको यस ठाउँमा - मेरो विशेषज्ञता अन्यत्र आवश्यक छ।
अझ ठूलो कारण भने यो हो किनभने मलाई विश्वास छैन कि विकासकर्ताहरूको लागि अतुलनीय मांगको माग अन्त्य हुनेछ।
किन? किनभने प्रमुख प्लेटफर्महरूले अविश्वसनीय राम्रो नो-कोड समाधानहरू तैनाथ गर्दैछ।
कुनै कोड, कोडलेस र न्यून कोड समाधानहरू
डिजिटल टेक्नोलोजीको अर्को चरण हामीले गरेको थोरै समयमा देखेको कुनै पनि प्रगति भन्दा बढी रमाईलो हुन सक्छ। ठूला निगमहरूले ड्र्याग र ड्रप (कुनै कोड वा कोडलेस) समाधानहरू विकास गरिरहेका छन् जुन अत्यन्तै राम्रा छन्। यी प्रणालीहरूको लागि अवसर असीमित छ किनकि व्यावसायिक नेताहरूले वास्तवमै विकास फर्मको आवश्यक पर्दैन उनीहरूको समाधानलाई नैपकिन स्केचबाट पूर्ण-अनुप्रयोगमा ल्याउँदछ।
यदि तपाईं प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ गुगल कार्यक्षेत्र तपाईको संगठनको लागि (म यो सिफारिश गर्दछु कि), उनीहरूले AppSheet सुरू गर्यो - एक कोड कोड बिल्डर! संग AppSheet, तपाईं चाँडै स्ट्रिमलाइन, स्वचालित, र कार्य सरलीकृत गर्न मद्दत गर्न अनुकूलन अनुप्रयोगहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै कोडिंग आवश्यक छैन।
तपाईंको गुगल वर्कस्पेसमा जो कोहीले आफ्नै अनुप्रयोगहरू बनाउन र ब्यबश्थापन गर्न सक्दछ ... जसले तपाईंको टीमको उत्पादकता बढाउन, त्रुटिहरूलाई कम गर्न, र तपाईंको विकास टोलीको ब्याकलॉग कम गर्न सक्दछ।
AppSheet सामग्री स्वीकृति आवेदन
यहाँ एक महान उदाहरण छ, एक व्यवस्थापन अनुमोदन आवेदन यसले Google पानाहरू र AppSheet समावेश गर्दछ सजिलै चरण-देखि-चरण स्वीकृति प्रक्रियाको माध्यमबाट सामग्री धक्का गर्न।
यो विशेष अनुप्रयोग गुगल पानाहरूमा मात्र जडित छ, तर तपाईं आफूले चाहानु भएको कुनै पनि डाटा स्रोत एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ।
ITunes वा Google Play मा डिप्लोय गर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो भाग? कोडको रेखा बिना नै तपाईंले भर्खरै समय खर्च गरेको अनुप्रयोग केवलaहोईन वेब अनुप्रयोग त्यो ब्राउजरमा चल्छ, AppSheet ले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुप्रयोगको व्हाइटलेबल संस्करण सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन तपाईं Google Play वा iPhone मा ITunes मार्फत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
डिप्लोयमेन्टलाई न्यूनतम AppSheet इजाजतपत्र आवश्यक पर्दछ जुन एक भुक्तान-प्रति-प्रयोगकर्ता वा एक प्रो संलग्नतामा आधारित छ।
प्रकटीकरण: म मेरो प्रयोग गर्दैछु गुगल सम्बद्ध कोड यहाँ।
टैग: एप्पल आईओएसएप्सटकोडलेससामग्री अनुमोदन अनुप्रयोगगुगल अनुप्रयोगगुगल अनुप्रयोग पानागुगल व्यवसायगुगल प्लेगुगल कार्यस्थलgsuiteiOSios अनुप्रयोगItunesमोबाइल अनुप्रयोगकुनै कोड छैनकुनै कोड अनुप्रयोग बिल्डर
व्यक्तित्व, क्रेता यात्रा, र बिक्री फनेल बीचको सम्बन्ध